उच्चशिक्षाको ओरालो यात्रा- विचार - कान्तिपुर समाचार
भाद्र २०, २०७६ लोकरञ्जन पराजुली
राष्ट्रिय सभाबाट भर्खरै ‘शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७६’ सत्ताधारी पार्टीका सदस्यहरूको बहुमतबाट पारित भएको छ । यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिनेछ । राष्ट्रिय सभामा जस्तै विधेयकलाई त्यहाँ पनि बहुमतले पारित गरिनेछ र औपचारिक रूपमा ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो प्रस्तावित ऐनले नेपालका एघार विश्वविद्यालयका ऐन परिवर्तन गर्नेछ ।
झट्ट हेर्दा यो ऐन बनाउनुको उद्देश्य पुराना ऐनमा रहेको ‘शिक्षा मन्त्रालय’ को नाम हाल परिवर्तन भएकाले त्यसलाई सच्याउने अथवा नयाँ संविधानसँग बाझिएका, अमिल्दा कुरालाई मिलान गर्ने हो कि जस्तो देखिन्छ  । त्यसो हुँदो हो त सो स्वाभाविक र वाञ्छनीय मानिन्थ्यो । तर अन्य केही ऐनजस्तै यो पनि कुत्सित मनसाय राखेर संशोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
यो ऐनमार्फत विश्वविद्यालयउपर प्रधानमन्त्री (कुलपति) र शिक्षामन्त्री (सहकुलपति) को पकड बढाउन खोजिएको प्रस्ट छ  । ऐन संशोधन गर्दा पहिले नभएका धारा ‘सहकुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न, गराउन र निर्देशन दिन सक्नेछ’ थपिएको छ  । अर्थात्, शिक्षामन्त्रीले अब विश्वविद्यालयमा सीधै हस्तक्षेप गर्न कानुनी बाटो खोलिन लागेको छ  । हिजोसम्म नियुक्तिमा दलीय हस्तक्षेप थियो, अब दैनन्दिनीमै कार्यकारी हस्तक्षेप भित्रिँदै छ ।
विश्वविद्यालय र सोको नेतृत्वलाई नेताको कब्जामा राख्न अर्को प्रावधान पनि थपिएको छ  । यो नयाँ ‘पदबाट हटाउन सकिने’ दफा अनुसार, कुलपति र सहकुलपतिले चाहे कुनै पनि विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई तत्काल हटाउन सकिन्छ  । यो प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालयको नेतृत्व तहलाई हटाउन जम्मा एकतिहाइ सभा सदस्यको उजुरी काफी हुन्छ  ।
उजुरी पाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले छानबिन समिति गठन गर्छन्  । छानबिन समिति गठन भैसकेपछि सो पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्छ  । यो प्रावधान भनेको राजनीतिक नेताले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको घाँटीमा ‘मैले भनेको मान्छस् कि हटाइदिऊँ’ भनेर तरबार झुन्ड्याउनुसरह हो  ।
दुरुपयोग भैसक्यो !
यो प्रावधानको दुरुपयोग हुनैपर्छ भन्ने के छ र ? शंकाको लाभ दिऔं भन्ने पनि कोही होलान्, तर यो प्रावधान वा दफाको दुरुपयोग भैसकेको छ ।
हाल सरकारले थप्न लागेका यी प्रावधान सुदूर पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल जस्ता विश्वविद्यालयमा यसअघि नै परिसकेका थिए । ती विश्वविद्यालयका केही पदाधिकारीलाई हटाउन यही प्रावधान प्रयोग गरिएको थियो ।
सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रार मिलेर नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचार गरेको उजुरी पर्‍यो । उनीहरूमाथि ‘छानबिन’ गर्न गत वर्ष माघमा समिति गठन गरियो । पदाधिकारीहरू स्वतः निलम्बनमा परे । छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सम्बन्धितहरूलाई बुझाइसकेको छ । यद्यपि प्रतिवेदनमा के भनिएको छ, बाहिर आएको छैन ।
बदमासी गरेका भए यी पदाधिकारीलाई पदमुक्त मात्रै होइन, कारबाहीसमेत गर्नुपर्थ्यो । होइन भने निलम्बन फुकुवा गरी उनीहरूलाई यथास्थान काम गर्न दिनुपर्थ्यो । तर दुवै भएन, न कारबाही भयो, न पुनःस्थापन । सो ऐनमा तीस दिनभित्र छानबिन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर छानबिनपछि कहिलेसम्म छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने, त्यो उल्लेख छैन । सोही कारण निलम्बनको प्रक्रिया सुरु भएको महिनौं हुँदा पनि छिनोफानो गरिएन, ती पदाधिकारी निलम्बनमै रहिरहे । र अहिले उनीहरूको पदावधिसमेत समाप्त भैसकेको छ । सोही प्रक्रिया मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा पनि दोहोरियो ।
निलम्बनका पछाडि दलीय आग्रह थिएन भने, ती उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीलाई फगत आरोप लगाएर निलम्बनमा राखिन्थेन । विश्वविद्यालयउपर यस्ता दलीय हस्तक्षेपले तिनलाई अस्तव्यस्त तुल्याएका छन्, छियाछिया पारेका छन् । यसले वर्तमान सरकार विश्वविद्यालयहरूलाई शनैःशनैः निकम्मा बनाएर तिनलाई सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो मुट्ठीमा पार्न उद्यत रहेको त छैन भन्ने शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिन्छ ।
कान नसुन्ने सरकार
पुराना ऐनलाई नयाँ संविधानसम्मत तुल्याउने निहुँमा सरकारले जस्केलाबाट नयाँ–नयाँ प्रावधान थपेर विश्वविद्यालयको रहेसहेको स्वायत्तता कानुनी रूपमा खोस्न खोजेपछि सोको विभिन्न तवरबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
सरकारले ल्याएको विधेयकको मनसाय र त्यसले पार्न सक्ने दूरगामी प्रभावबाट चिन्तित हुँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासहित विभिन्न विश्वविद्यालयका करिब एक दर्जन पूर्वउपकुलपतिले प्रेस सम्मेलन गरी एकैस्वरमा आपत्ति जनाएका थिए । सो विधेयक फिर्ता लिन उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका थिए (हेर्नुहोस्, कान्तिपुर, ४ जेठ २०७६, पृ १) । यो नेपालको इतिहासमै यस्तो अपूर्व अवसर थियो, जसमा यति धेरै पूर्वउपकुलपति एउटा ‘कज’ का लागि एकै ठाउँ आए । ज्ञातव्य छ, ती उपकुलपतिमध्ये अहिलेको सत्ताधारी पार्टी नेकपासँग निकट मानिनेहरूसमेत थिए ।
ती सबै पदाधिकारीले समवेत स्वरमा भनेका थिए— यो नयाँ विधेयक जरुरी छैन, यसले विश्वविद्यालयलाई अधोगति लानेछ, रसातलमा पुर्‍याउनेछ । पहिले नियुक्तिमा मात्र सीमित दलीय हस्तक्षेप अब विश्वविद्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनसम्म पुग्ने भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका थिए । प्राज्ञहरूका स्वरलाई त सरकारले सुनेन–सुनेन, उसले आफैले विगतमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीका गम्भीर आग्रह पनि सुनेन ।
नयाँ संविधान बमोजिम निर्वाचन भई ठूलो बहुमतसाथ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको सरकार बन्यो । यो सरकार बनिसकेपछि गत वर्ष असारमा मूलतः आफ्नो दलको वरपर रहेका व्यक्तिहरू समेटेर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरियो । सो आयोगले छ महिनाभन्दा बढी लगाएर प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन त बुझे, तर कहिल्यै सार्वजनिक गरेनन् । आफ्नो नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदनधरि सार्वजनिक गराउन नसक्ने मन्त्रीलाई पदमा बसिरहन नैतिकताले नदिनुपर्ने हो, तर पोखरेललाई त्यसले छोएन, उनी पदमा लिसोझैँ टाँसिइरहे । त्यसपछि उनले आफ्ना पाँच जना विश्वासप्राप्त व्यक्तिको समूहलाई सो प्रतिवेदनमा आधारित रही राष्ट्रिय शिक्षा नीति तयार गर्न दिए । सो समूहले केही आधारभूत पक्षमा ‘ट्याम्परिङ’ गरेर तर कतिपय कुरा जस्ताको तस्तै सारेर मन्त्री पोखरेललाई नयाँ ‘शिक्षानीति’ बुझायो ।
सार्वजनिक बहसमा नल्याइएको र गुपचुप राखिएको यो नीति प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको समूहले केही महिनादेखि यो वा ऊ बहानामा क्याबिनेटमा पुग्नबाटै रोकिरहेको छ । एउटा मन्त्री आफ्नो ‘सिग्नेचर वर्क’ नै सार्वजनिक गर्न सक्दैन, त्यसलाई ‘टोन डाउन’ गरेर पनि नीति बनाउन सक्दैन भने ऊ कुन नैतिकताका आधारमा पदमा बसिरहने हो भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।
यी दुवै प्रकरणमा शिक्षामन्त्री पोखरेलको निरीहता देखियो, दोषभन्दा पनि बढी । प्रतिवेदन र नीति सार्वजनिक नहुनु, कार्यान्वयनमा नजानुमा मुख्य दोष नेकपा र त्यसका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जान्छ । तर माथि उल्लिखित संशोधित विधेयकको हकमा भने शिक्षामन्त्री नै दोषी देखिन्छन् ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गराउन नसकेको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन र पारित गराउन नसकेको शिक्षानीति दुवैमा उच्चशिक्षामा भैरहेको दलीय हस्तक्षेप रोक्न विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त बनाउने कुरा छ । तिनमा प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था परिवर्तन गरी त्यसको सट्टा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’ गठन गर्ने कुरा परेको छ ।
यो नीति कार्यान्वयन गरिए बोर्डले नै आइन्दा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने थियो । बोर्डमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष भूमिका नहुने हुँदा दलीय हस्तक्षेपबाट विश्वविद्यालयले थोरै राहत पाउने विश्वास गरिएको थियो ।
तर यहीँनेर विडम्बनापूर्ण स्थिति देखिएको छ । एकातिर तिनै शिक्षामन्त्री विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउने भन्दै प्रतिवेदन तयार पार्छन्, नीति बनाउन लगाउँछन् अनि अर्कातिर विश्वविद्यालयमा रहेसहेको स्वायत्ततासमेत खोस्ने विधि स्वयं बनाउँछन् । कानुन संशोधन गर्ने निहुँमा विश्वविद्यालयलाई मनमौजी तरिकाले चलाउने प्रावधान घुसाउँछन् । विश्वविद्यालयमा सत्ताधारीको पकडलाई थप मजबुत बनाउन दैनन्दिनीमा हस्तक्षेप गर्ने कानुन पारित गराउँछन् ।
शिक्षामन्त्रीले अगाडि बढाइरहेको र शिक्षा व्यापारीहरूले आफ्ना स्रोत–व्यक्तिमार्फत रोकिरहेको शिक्षानीति दुई–चार महिना ढिलोचाँडो कुनै न कुनै अवतारमा आउला नै । सो नीति आयो भने अहिले अगाडि बढाइएको ऐनको सान्दर्भिकता समाप्त हुनेछ र पुनः ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हो भने किन छोटो समय टिक्ने संशोधन गर्न शिक्षामन्त्री र सरकार लागिपरेका हुन्, बुझ्न कठिन छ ।
बोली र नीति एकातर्फ र व्यवहार अर्कातर्फ गरेका शिक्षामन्त्री अहिले निरीह मात्र होइन, निर्लज्जसमेत देखिएका छन् । कारण जेसुकै भए पनि यो प्रवृत्तिले शिक्षामन्त्री पोखरेलको साख त गिराएको छ नै, अहिले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक (जुन छिट्टै कानुन बन्दै छ) ले विश्वविद्यालयको गरिमा र मर्यादालाई पनि धूलिसात् पार्नेछ । अनि यसले नेपालको उच्चशिक्षा क्षेत्रलाई आउँदा धेरै वर्ष उठ्नै नसक्ने गरी धराशायी तुल्याउने पक्का छ ।
प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ ०८:५१
लेखक मार्टिन चौतारी सम्बद्ध अध्येयता हुन् ।
प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०८:५५